RN outdoor- 20 years continue to focus on men's three in one waterproof jackets, နှင်းလျှောစီးအောက်ပါအတိုင်း, ထုတ်ကုန်, outdoor jacket, cotton-padded clothes, clothing manufacturers, We cooperate with many famous brands such as CK, South Korea napping, စသည်တို့ကို. in OEM or ODM.
ထုတ်ကုန်：1000 ထုတ်ကုန်, ထုတ်ကုန်
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။: men's three in one waterproof jackets
Manufacturing : အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။
အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။: အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော ကွန်ပျူတာပြားနှင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အပ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားကြောင်း Ruiniu က အခိုင်အမာဆိုသည်။
ထုတ်ကုန်: 50 ထုတ်ကုန်, 300 free samples
Delivery time: 50 pieces-10days, 300pieces-20days
Features: Detachable,3kinds of wearing methods, fabrics to keep warm from the cold, Anti-splash water, wear-resistant.
Flexibility:3ways to wear, free matching and inner Anti-splash water.
Windproof: Generally, it is difficult to inject cold air, effectively shielding the wind from the cold.
Breathable: Accelerates venting and venting when violently moving.
Three-in-one removable windbreakers3ways to wear
Three-in-one removable windbreakers could flexible to choose Downs or Fleece. It could windproof, warmth, single wear, match wear in spring, autumn and winter seasons.
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်：+86-0757-86269715
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်: +86-18928650351
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်:3ကြမ်းပြင်, Xiyueqijian ရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အ ဦး, Leigang ရပ်ရွာ, Guicheng Subdistrict, အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်,ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်,တရုတ်နိုင်ငံ
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်, အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည် 2002, အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည် 20 အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်.
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်, အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်. အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည် 30 အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်.
အရည်အသွေးမြင့် ဇစ်နှင့် Velcro ပေါင်းစပ်မှုသည် လေနှင့် အအေးဒဏ်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နိုင်သည်။ လိပ်လည်ပင်းသည် ပြင်ပလေအေး၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ ခုခံနိုင်သည်, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။.